Ducooyinka Axdiga ee Horumarka | TILMAAMAHA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Salaadaha Axdiga ee Horumarka
Salaadaha Axdiga ee Horumarka
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda axdiga ee Breakthrough. Miyaad isku deyeysay inaad wax samayso muddo dheer, laakiin gacmahaaga kaliya kuma soo qaadi kartid. Haddii tani kugu dhacday, waa waqtigii aad u yeeri lahayd Ilaahay si uu kuu caawiyo. Salaadda Axdiga ee horumarku waxay jebisaa caqabad kasta ama carqalad kasta oo cadowgu u qorsheeyay inuu ku joojiyo.
Qof kasta oo weyn, waxaa jira caqabad uu cadowgu u qorsheeyay inuu joojiyo. Nasiib darrose in la ogaado, dad badan oo waaweyn ayaa laga hor istaagay caqabado ay awoodi kari waayeen inay horumar gaaraan. Mid ka mid ah sababaha carqaladayntu u sii wadi doonto qabashada nin maxaabiis ah ayaa ah iyada oo aanu weli caawimaad codsan. Si uu ninku uga adkaado awoodda cadowga, si uu nin guul uga helo carqaladaha jinka, si horumar loo gaaro, waa in ninku raadsado kaalmada Ilaah.
Buugga Sabuurradii 125: 1 - "Kuwa Rabbiga isku halleeyaa waxay noqon doonaan sida Buur Siyoon oo aan la dhaqaajin karin, laakiinse weligeedba sii jirta. Markaad Rabbiga isku hallaysaan, isaga ka barya inuu ku caawiyo, oo isna wuu idin caawin doonaa. Aynu xusuusanno qisadii reer binu Israa’iil intii ay maxaabiista ku ahaayeen dhulka Masar. Xayndaabka u dhexeeya iyaga iyo dalka Kancaan, oo loogu dhaartay waa Masriyiintii. Habeen iyo maalinba way dadaalayeen, iyagoo raadinayey habka ugu wanaagsan ee ay isku xoreyn lahaayeen, laakiin kuma guuleysan. Horumarkooda, si kastaba ha ahaatee, waxay yimaadeen markii ay Ilaah u qayshadeen caawimaad. 6: 5 Oo weliba waxaan maqlay cabaadka reer binu Israa'iil oo Masriyiintu addoonsiga ku sii hayaan, oo axdigaygii baan xusuustay.
Markaan Ilaahay ka baryinno caawimaad, horumarkeennu wuxuu ku dhow yahay geeska. Carruurtii Isreal waxaa dhibsaday marar badan Falastiin. Waqtigoodii horumarku wuxuu yimid markii Daa'uud, nimcada Ilaah, kaga adkaaday Goli'ad. Sidii Ilaah u badbaadiyey carruurta Isreal maxaabiisnimada, maanta ayaa lagugu samatabbixin doonaa magaca Ciise. Caqabad kasta oo ka dhex taagan adiga iyo horumarkaaga nolosha, waxaan ku burburiyaa awoodda Ruuxa Quduuska ah.
Sayidow, waxaan kuugu mahadnaqayaa hadiyadda nolosha. Waxaan kuugu mahadnaqayaa badbaadintaada noloshayda. Waxaan kaaga mahadcelinayaa ducadaada iyo bixintaada. Waan kuugu mahad naqayaa sababtoo ah ma aadan oggolaan in qorshaha cadowgu noloshayda ku guulaysto. Magacaagu ha sarreeyo.
Sayidow, waan jebin doonaa silsilad kasta oo addoonsiga ah oo loo isticmaalay inaan hoos u dhigo. Waxaan ku baabi'iyaa dab magaca Ciise. Sayidow, silsilad kasta oo loo adeegsaday inay i qabato, waxaan ku jebiyaa xoogga ruuxa quduuska ah magaca Ciise.
Aabbow Rabbi, caqabad kasta ama gidaar jinni oo hortayda taagan ayaa iga hortaagan inaan gaadho yoolkayga nolosha, oo iga hortaagan inaan gaadho himiladayda. Waxaan ku burburiyaa xannibaadda noocaas ah magaca Ciise.
Buurtan weynay, kumaad tahay? Serubaabel hortiisa waxaad noqon doontaa bannaan. Oo wuxuu soo bixin doonaa dhagaxii weynaa isagoo ku dhawaaqaya “Nimco, nimco ha ka ahaato !. Buur kasta oo i hor taal, maanta ayaan kugu qiimeynayaa magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa caqabad kasta oo ka hor imaanaysa awooddayda dhaqaale maanta magaca Ciise. Awood kasta oo jinni iyo madaxnimo ayaa hoos ii dhigaysa mar kasta oo aan isku dayo inaan sameeyo wax weyn, maanta ayaan ku baabi'inayaa magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan ku baryayaa naxariistaada, inaad ku kicin doonto caawiyaha aayaha oo iga caawin doona saboolnimada. Ninka ama naagta aad u diyaarisay inay iga caawiso saboolnimada, waxaan ka baryayaa xiriir rabbaani ah magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ka hor imanayaa awood kasta oo Faaris ah oo dib u dhigaysa Barakayga. Waxaan amar ku bixinayaa in aargudashada Rabbigu ay ku soo degi doonto amiir kasta oo reer Faaris ah oo u taagan sidii caqabad ku noqon doonta ducadayda magaca Ciise.
Sayidow, waxaan hoos u dhigayaa amiir kasta oo Faaris ah aabbahay ama hooyaday, anigoo dhib ku haya koritaankeyga nolosha magaca Ciise. Aabe, waxaan ku baryayaa in awoodaada, aad igu siiso guul ka dhan kasta oo turunturooyin ah oo iga gees ah magaca Ciise.
Sayidow, waayo, waa qoran tahay, Waan ku hor kici doonaa, Oo meelaha sarraynta ayaan sarraysiin doonaa. Aabbe, waxaan ku baryayaa in xooggaagu uu hortayda tago maalin kasta oo noloshayda ah. Awood kasta oo cadowga ah, buur kasta oo aniga iyo aniga dhexdayda taagan, waxaan maanta kugu sarraysiinayaa magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan ku baryayaa in nimcadaada, aad dhexdayda iiga dhex muuqato, oo waxaad i siin doontaa awood aan ku barto horumarka rabbaaniga ah ee magaca Ciise. Waxaan amrayaa maanta laga bilaabo inaan mar dambe addoon u noqon doonin caqabadaha ku jira magaca Ciise.
Sayidow, sidaad Daanyeel ugu ducaysay ruuxa sarraynta, waxaan kaa codsanayaa in xooggaaga, aad igu siiso heer sare magaca Ciise. Ruuxa heer sare ee iga dhigaya inaan ka sarreeyo meel kasta oo ka sarraysa awood kasta oo cadowga ah oo doonaysa inuu hoos ii soo dejiyo, waxaan kaa baryayaa inaad maanta ii sii dayso magaca Ciise.
Aabe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad maanta awooddayda dhaqaale ku kordhiso magaca Ciise. Waxaan ku tukanayaa in noloshayda maaliyadeed ay hesho dardar ka sarraysa magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad ku ceebeyso xoog kasta oo dib -u -dhac ku ah noloshayda maanta magaca Ciise. Waxaan ku amrayaa awoodda jannada, awood kasta oo dulli ah, xanuun iyo sharafdarro ah, waxaan ku baabi'in doonaa noloshayda maanta magaca Ciise.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay waxaan heli doonnaa awood marka Ruuxa Quduuska ahi nagu soo dego. Waxaan ka helayaa awood ka sarraysa xagga sare magaca Ciise. Waxaan helayaa awood aan ku taaban karo. Waxaan helayaa awood aan ku joojin karo. Waxaan helayaa awood aan ku lumiyo awood kasta oo cadowga magaca Ciise.
Waxaan ka hadlayaa horumarkeyga runta maanta ah magaca Ciise. Waayo, way qoran tahay, wax sii sheeg, oo way adkaan doontaa. Waxaan ku dhawaaqaa horumarkeyga runta ah magaca Ciise.
article PreviousDucooyinka axdiga ee fadliga leh
Next articleDucooyinka axdiga ee Naxariista
100 Dhibcood Oo Loogu Tukado Guusha Ka Dhanka Cadowga
Jebinta Qodobbada Salaadda ee Faa'iidada Dhibcaha
Salaada Ciidda Masiixiga ee Qoysaska
Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Musiibada